Fanarenana vaovao ho an'ny fizahantany italiana mitentina 1 miliara euros
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Fanarenana vaovao ho an'ny fizahantany italiana mitentina 1 miliara euros
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
1 Miliara Euros ho an'ny fanarenana ny fizahantany Italia
Ny vondrona banky iraisam-pirenena Italiana an'ny Intesa Sanpaolo dia nanome 1 miliara euros ho fanohanana ny fanarenana ny orinasa madinika sy salantsalany eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Mamporisika ny fampiasam-bola izay mizotra mankany amin’ny fizahantany maharitra, mifanaraka amin’ny lalan’ny Drafi-pirenena momba ny fanarenana sy ny faharesen-dahatra (PNRR).
Ny fandraisana an-tanana, miaraka amin'ny Sace, sampan-draharaham-panjakana miasa amin'ny fanapariahana ny orinasa iraisam-pirenena, no fidirana mivantana voalohany amin'ny SME (orinasa madinika sy salantsalany) ao amin'ny sehatra ho ampahany amin'ny programa stratejika motor italiana. Ny drafitry ny fampiasam-bola ao amin'ny Institute of Credit, dia manome ny fanomezana loharanom-bola fanampiny ho an'ny 120 lavitrisa, natomboka tamin'ity taona ity miaraka amin'ny valindrihana 50 lavitrisa, izay hameno ny vola omen'ny NRP ho an'ny famerenana indray ny firenena. Indrindra indrindra ny sehatry ny digitalization, ny tetezamita ekolojika, ny fivezivezena maharitra, ny fanabeazana sy ny fikarohana, ny fampidirana sy ny firaisankina ary ny fahasalamana.
Ny fidirana an-tsehatra fanohanana nambaran'ny vondrona banky tarihin'i Carlo Messina dia hamatsy vola ny SME eo amin'ny sehatra indrindra amin'ny sehatra 3: fanatsarana sy fampitomboana ny fenitry ny kalitaon'ny trano fonenana, ny faharetan'ny tontolo iainana amin'ny tolotra, ary ny digitalization. Ny fepetra voalazan'ny didim-panjakana 43 mifandraika amin'ny fepetran'ny fizahantany PNRR dia ampidirina ao anatin'ny hetsika ihany koa.
Misy vahaolana famatsiam-bola 2 novolavolaina amin'ity toe-javatra ity. Ny voalohany dia ny Suite Loan, natao ho an'ny orinasam-pizahantany izay te mikendry ny kalitaon'ny trano fonenana. Ny faharoa dia S-Loan Turismo, mikendry ny hamporisika ny fampiasam-bola mikendry ny fanavaozana sy ny angovo ny trano fandraisam-bahiny.
Efa nandritra ny taona 2020, nanohana ny orinasam-pizahantany i Intesa Sanpaolo tamin'ny alàlan'ny fampiatoana ny fampindramam-bola 70,000 mitentina 8 lavitrisa ary ny famoahana vola vaovao an'arivony tapitrisa amin'ny alàlan'ny vokatra voatokana.
“Ny fizahantany dia tsy azo ihodivirana ny iray amin'ireo sehatra niharan'ny valan'aretina. Hatrany am-piandohana dia nanolotra ny fanohananay izahay tamin'ny alàlan'ny fanomezana 2 lavitrisa euros mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny orinasa haingana, ”hoy i Stefano Barrese, lehiben'ny Bankin'ny Diviziona Territories an'ny Institut.
Noraisin'ny solontenan'ny ny sehatry ny fizahan-tany. “Ny fandraisana an-tanana vaovao nambaran’ny Intesa Sanpaolo dia ahafahan’ny orinasa madinika sy salantsalany eo amin’ny sehatry ny fizahantany hiaraka amin’ny tetezamita. Mankasitraka ny fahavononan'i Intesa Sanpaolo hanohana ny fanavaozana ny trano fandraisam-bahiny italiana izahay, ”hoy ny filohan'ny Federalberghi, Bernabò Bocca.
Araka ny filazan'i Maria Carmela Colaiacovo, Filohan'ny Fikambanan'ny Italiana Confindustria Hotels, "Ny fonosan'ny fitsabahana fantatra dia tena voalamina tsara ho an'ny sehatra."
"Ny fanohanana ny sehatry ny spa [koa] dia avy amin'ny Intesa Sanpaolo," hoy i Massimo Caputi, filohan'ny Federterme Confindustria.